Burma Partnership » Statement on the International Day of Peace
By Gender and Development Institute-Myanmar • September 21, 2015
Peace isaprerequisite for sustainable development. Without justice, peace is impossible. For Myanmar towardsademocratically developed country, we need peace to come first. Peace is not just endingawar butastate where justice flows as river. The Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) isaprerequisite for startingapolitical dialogue process that is to seekagreater and comprehensive solution for chronic federal conflicts in Myanmar politically. The NCA is to end the wars between Myanmar Tatmadaw and the Ethnic Armed Organizations (EAO), and to open opportunities to buildapeaceful and better country for its all citizens. Thus, all conflicting parties especially Myanmar Tatmadaw are gravely required to show their strong commitment that the NCA to be signed wholeheartedly and inclusively. We strongly urge all conflicting parties to stop the current fighting in Kachin and Shan states immediately so that all civilians including women and children are to be living freely from fears.
ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ရေရှည်ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ကနဦးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ တရားမျှတမှုမရှိ လျင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးသည် မဖြစ်နိုင်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် သောနိုင်ငံဖြစ်ရေးအတွက်ဆိုလျင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရှေးဦးစွာဖြစ်ထွန်းရန်လိုအပ်ပေသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုသည်မှာ စစ်ပွဲများရပ်စဲသွားခြင်းမျှသာမဟုတ်၊ တရားမျှတမှုသည် မြစ်ရေကဲ့သို့ စီးဆင်းနေသော အခြေအနေမျိုးဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်သည် နှစ်ပေါင်း များစွာတည်ရှိခဲ့သည့် ဖက်ဒရယ်ပဋိပက္ခအတွက် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် ပြည့်စုံကုံလုံသောအဖြေ ရရှိရန်ရှာဖွေမည့် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အစပြုနိုင်ရေးအတွက် ကနဦးလိုအပ်ချက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်သည် မြန်မာ့တပ်မတော် နှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကြား တိုက်ခိုက်မှုများရပ်စဲပြီး၊ နိုင်ငံသား များအားလုံးအတွက် ငြိမ်းချမ်း၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော နိုင်ငံတော်တစ်ရပ် တည်ဆောက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော်အပါအ၀င် ပဋိပက္ခ နှင့် သက်ဆိုင်နေကြသူများအားလုံးသည် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ကိုစိတ်ပါလက်ပါ၊ အားလုံးပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ကြရေးအတွက် ခိုင်မာသောသံန္နိဌာန်နှင့် စိတ်အား ထက်သန်မှုကို အလေးအနက် ပြသရန် လိုအပ်သည်။ ထို့အတူ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် တို့တွင် အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်များအပါအ၀င် အရပ်သားများည် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုအပေါင်းမှ ကင်းဝေးစွာနေထိုင်နိုင်ကြစေရန် ယခုဖြစ်ပွားနေသောပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကို ချက်ချင်းရပ်စဲရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
Tags: Ethnic Armed Organisations, Gender and Development Institute-Myanmar, International Peace Day, Kachin State, Nationwide Ceasefire Agreement, Shan State